सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि विचौलिया हावी भएको हो ? « Sagarmatha Daily News
सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा पनि विचौलिया हावी भएको हो ?
बागमती प्रदेशसभा सदस्य रिता माझीले प्रदेश सरकारले कृषकहरुलाई लक्षित गरेर ल्याएको सहुलियतपूर्ण ऋण कार्यक्रममा विचौलिया हावी भएको बताएकी छिन् । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारले ल्याएको सो कार्यक्रममा समेत विचौलियाको हावी भएको जानकारी आएको बताइन् ।
रामेछापका केही कृषकहरुले उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण नपाएको तर विचौलियाले ५० हजार रुपैयाँ लिएर ऋणको व्यवस्था गरिदिने जानकारी आएको उनले बताइन् । कृषकले सो विषयमा प्रश्न गरेपछि संसद्मा आफुले सम्बन्धित मन्त्री र सरकारसँग जवाफ माग गर्ने जवाफ दिएको र त्यस्तो काम नगर्न कृषकलाई आग्रह गरेको उनले बताइन् ।
विपद्को समयमा जोखिम न्युनीकरणका लागि स्थानीयहरुले माग गरे अनुसारका आवश्यक सामग्रीहरु सरकारले यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् । अविरल वर्षाका कारण मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको मरिणमा डुबान हुने देखिएकाले सो क्षेत्रका लागि सरकारले आवश्यक सामाग्री तत्काल उपलब्ध गराएर क्षति रोक्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।